Nin Soomaali ah oo Xaaskiisa Toorey Daanka ka galiyay +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Nin Soomaali ah oo Xaaskiisa Toorey Daanka ka galiyay +Sawirro
Dhawaan Deegaanka Khorof Harar Degmadda Wajeer ee Gobolka Wqaooyi Bari Dalka Kenya waxaa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badneed, kadib markii nin kamid ahaa dadka deegaanka uu xaaskiisa midi af badan uu ka galiyay daanka.
Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Deeq ayaa muran waxa uu soo kala dhax galay xaaskiisa oo iyana lagu magcaaabo Faaduma Ibraahin, ninkan ayaana muranka kadib waxa uu midi uu heestay uu daanka ka galiyay xaaskiisa, iyadoona ay adkaatay in mididaasi daankeeda si sahal looga saaro haweynadan.
Faadumo oo daankeeda ay ka suran tahay midida ayaa la geeyay Isbitaalka guud ee Wajeer , hasa ahaatee dhaqaatiirta Isbitaalka ayaa sheegay in aysan waxbo ka qaban karin, waxaana Haweeneydaasi dhaawaceeda si deg deg ah loogu duuliyay magaalada Nairobi.
Isbitaalka Kenyatta National Hospital ayaa la geeyay dhaawaca haweeneydan, waxaana qaliin lagu sameeyay oo qaatay mudo saacad ah iska kaa shaday ilaa shan dhaqtar oo kamid ahaa dhaqaatiirta ugu sareysa ee Isbitaalka ka howlgasha.
Dhaqaatiirta ayaa ku guuleestay in Daanka Faaduma ay kasoo saaraan mindi dhereekeedu dhamaa 4 inch, Raajo la saaray gabadhan ayaa muujisay in mindida laga geliyey daankeeda midig, kana dustay ilaa meel ku dhow isheeda bidix
Ninkan falkan ka dambeeyay oo lagu Magacaabo Maxamed Deeq ayaa hada ku xiran xabsi kuyaala Magaalada Wajeer, waxa ayna lamanahan isku hayeen afar Caruur, walina si dhab ah looma oga sababta keentay in uu dhaawacan halista ah uu gaarsiiyo xaaskiisa.